တရုတ် 90mm ဖြတ်တောက်ထားသောလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလတ်စတစ်သုံးအရောင်ပါးလွှာသောအလင်းရောင်သည် Fascia ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူနှင့်အတူ | Simons
90mm Cut-out Aluminum Coated ပလတ်စတစ်သုံးအရောင်ပါးလွှာသောအလင်းရောင်အောက်ခံအောက်ခံ Fascia
မြင့်မားသောအပူစီးကူးနိုင်သောပလပ်စတစ်အိမ်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူစွမ်းရည်၊ IC-4 rated light အလင်း၏တင့်တယ်သောအသွင်အပြင်နှင့်ယခင်ပုံသွင်းသောလူမီနီယံမီးအလင်းကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ SAA, C-tick, LM79, LM80, TM21 အားလုံးသည်သင့်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
90mm ဖြတ်ထုတ် လူမီနီယမ် Coated ပလပ်စတစ် Tri-ပူးတွဲဌငါတို့ Slim နားမလည်ဘူး ရာဝတီ Fascia
၁။ IC-4 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအိုးအိမ်ပေါ်တွင် V-0 မီးလျှံအဆင့်သတ်မှတ်သည်။
4. Excellent မှိန်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်, နောက်ကွယ်မှ - အစွန်း dimmer မှလွဲ။ အမှတ်တံဆိပ် dimmers အများစုအတွက်သင့်လျော်သည်
၅။ အာမခံ - ၃ နှစ်
44000hrs မှ 6. L70 ။
၇။ မြင့်မားသောအလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်မှု၊ 100lm / w အထိလုပ်နိုင်သည်
၉။ အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလပ်စတစ်ပစ္စည်းသည်အပူလွန်ကဲမှုရှိသည်၊ IC-4 ဖြစ်သည်။
၁၀။ အလင်းနောက်ကျော 3CCT switcher, သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ CCT ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ပါဝါ 8W, 9W, 10W ရပ်သွားသည် 90mm
အချင်း 108mm အမြင့် ၃၇.၅ မီလီမီတာ
အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် IP40 သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ လူမီနီယမ် coated ပလပ်စတစ်
CCT သုံးရောင် Beam Angle 100 °
အလင်းအရောင် အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင် တပ်ဆင်ခြင်း ရာဝတီ
ရှေ့သို့ Flat Fascia နှင့်အတူ 90mm Cut-out လူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလပ်စတစ် Tri-color ပါးလွှာသောအလင်းရောင်
နောက်တစ်ခု: 90mm Cut-out Tri-Colour Intergrated Downlight
595 × 595mm နောက်ကျော -lit Panel ကိုအလင်း
Tuya Smart ၅၉၅ × ၅၉၅ မီလီမီတာကျောဘက်မီးအလင်းရောင်
Tuya Smart 1295 × 295mm နောက်ခံမီးအလင်းရောင်